Imbali yeNkampani- Anping County Ansheng Wire Meshes Product Co., Ltd.
I-Anping County Ansheng Wire Meshes Imveliso Co, Ltd. yasekwa ngo-1996 ngu-chen shun feng,
Ngo-1996, ibiyivenkile encinci yehardware eGuangzhou, ikakhulu ebandakanyeka kwimingxunya yobhedu kunye nocingo lwentsimbi olungenasici
Ngo-1998,inkampani yamisela isebe lophando lwe-nickel. Ukulungiselela umnatha we-nickel, ukungenisa ngaphakathi amaziko amabini okubamba kunye neefowusi ezinobungakanani, kongezwa umasifundisane omtsha wesingxobo se-nickel, kunye nomatshini wokuluka ucingo. Iiseti ezili-11 zoomatshini bokuluka baseJamani zangeniswa zaze zayila ukuzoba ngocingo, umnatha kunye nokulungiswa okunzulu. Inkqubo yemveliso ehlanganisiweyo.
Ngo-2000Inkampani yasungula umzi-mveliso we-20,000m2 e-Anping, imveliso ehlaziyiweyo, ukuvavanywa, ukuhlolwa komgangatho, ukupakisha kunye nokugqiba, indawo yokugcina izinto kunye namanye amasebe ukwandisa indawo yeofisi.
Ukususela ngo-2001 ukuya ku-2005Inkampani yakha umasifundisane omtsha we-epoxy mesh kunye nomasifundisane ongenazintsimbi, kwaye ukuthengisa kwayo kumazwe angaphandle kwafikelela kwizigidi ezili-100.
2005-2010 Iworkshop yaguqulwa yenziwa iworkshop engenothuli yepepo resin paint
2010-2015 kunye nabathengi baseJamani baphuhlise ityhubhu yokujikeleza kunye nokubetha uthotho lwamanqaku, uthotho lweebhokisi zegiya lokucoca ulwelo.
Ngo-2016, I-Ofisi yeShijiazhuang yasekwa,
Ngo-2017, isebe lokucoca ngokunzulu elicwangcisiweyo lasekwa ukuba lingene kwimveliso yeplastiki yokuhluza i-polymer, ishishini leplastikhi yeplastiki, oomatshini bokungenisa ngaphakathi baseJamani, oomatshini bokucheba i-laser, kunye nokunyuka kokuhanjiswa kwexesha kunye nokuqinisekiswa komgangatho.
Ngo-2018, Uphuhliso lwezinto zokucoca uthuli kumzi mveliso weplastiki kunye nophuhliso lwezinto zokucoca ulwelo zasekwa.
Ngo-2019, Umcoci wamanzi kunye nesebe lokucoca amanzi lasekwa ukuze liphuhlise inkqubo yokwandiswa kwesakhelo sesicoci sesinyithi.